दुई, तीन महिनापछि आफै अनिवार्य अवकाश हुनेहरुले राजीनामा दिनु कुनै ठूलो कुरो होइन : डा भट्ट, पूर्व प्रसाशक
मुख्य सविच नियुक्तमा नियमा मिचिएको भन्दै ५ जना सचिवले राजीनामा दिएका छन् लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्दा किन अन्य सचिवले राजीनामा दिएका होलान, भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर पूर्व प्रसाशक डा भीमदेव भट्टसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ : मुख्य सविच नियुक्तमा नियमा मिचिएको भन्दै ५ जना सचिवले राजीनामा दिएका छन् । लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्दा किन अन्य सचिवले राजीनामा दिएका होलान, भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर पूर्व प्रसाशक डा भीमदेव भट्टसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ : मुख्य सचिव नियुक्तमा नियम मिचिएको भन्ने छ खास तपाईलाई के लाग्छ ? जतिजना मुख्य सचिवका दावेदावर थिए, ती सबै एकैदिन सचिवमा बढुवा भएका हुन । शंकर कोइरालाको म सिनियर हुँ भन्ने कुरा आयो । सिरियल नम्बर अनुसार कोइरालाको नामअघि आएको हो । सचिव बढुवा एकै दिन भएकाले सबै सचिव बराबर नै हुन । लीलामणि पौडेल नै कसरी योग्य भए होलान ? प्रसाशकको मुख्य व्यक्ति भएकाले त्यस पदमा काम गर्न सक्ने निडर व्यक्ति चाँहिन्छ । त्यो क्षमताले सायत लीलामणि पौडेल योग्य भएर नै नियुक्त भएका होलान । तर हिजो केही कमजोरी भएर त विजय गच्छदारले पौडेललाई फेरेका हुन । विगतमा काम गर्ने क्षमता पनि राम्रै रहेको भन्ने सुनिन्छ तर कोइराला योग्य थिएनन् भन्ने होइन ।
मान्छे जस्ले पनि आफ्नो अनुकूलको मान्छे नै नियुक्त गर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको देखेर पौडेलाई ल्याए होलान । मुख्य सचिव, वा सचिव नियुक्त गर्ने राजनैतिक प्रक्रिया स्वाभाविक मान्न सकिन्छकी सकिँदैन् ? त्यो स्वाभाविक मान्न सकिँदैन् र त्यस्तो गर्नु हुँदैन । विगतदेखि लोकमासिंह कार्की, विमल कोइराला, भोजराज घिमिरे तथा माधव घिमिरे यी सबैलाई नियुक्त गर्दा नियम मिचिर नै आएको छ । नियम यसबारेमा निष्कृय छ ।
राजा ज्ञाजेन्द्र प्रत्यक्ष शासनअघि १.५ को नियम थियो र २ वटा चाहिएपछि ३ जनाबाट छान्ने गरिन्थ्यो । अहिले ३ दोब्दर भन्ने चलन छ । पहिले कै नियमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसमा धेरै राजनीतिक खेल खेल्ने मौकाले यसलाई निरन्तरता दिएको हो । किन यस्तो गरिएको होला ? धेरै मान्छेबाट छान्न पाए तलबाट आफ्नो मान्छे आउछ भनेर नै दलहरुले यस्तो काम गरेका छन् । यसलाई दलहरुले किन सकारेका छन्, उनीहरुलाई नै थाहा होला । यसमा नेताहरु धेरै राजनीतिक चलखेल खेलेका छन् । यो नियमलाई संशोधान गर्न आवश्यक छ । सचिवहरुले राजिनामा दिइरहका छन्, के भन्नु हुन्छ ? २, ३ महिनापछि आफै अनिवार्य अवकाश पाउनेहरुले राजीनामा दिनु कुनै ठूलो कुरो होइन । त्यसैले राजीनामा दिनु नदिनुले केही महत्व राख्दैन । कुनै समयमा मुख्य सचिवको नाम सुन्दा मात्र कति गोरव लाग्थ्यो । यस्तै भए मुख्य सचिवको महत्व नै घटेर जान्छ । त्यसैले जतिसक्यो चाँडो कानुन संशोधन गर्नु पर्दछ । Comments